खाडीको जेलमा कति छन् नेपाली कैदी ? - Vishwa News
खाडीको जेलमा कति छन् नेपाली कैदी ?
काठमाडौं । वैदेशिक राजेगारीको अवसर खुलेसँगै अहिले करीव ४० लाख हाराहारी नेपाली यूवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको बताइन्छ । यसमध्ये विविध अपराधमा संलग्न करीव साढे ५ सय नेपाली बिभिन्न देशको जेलमा कैदि जीवन बिताइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार अहिले खाडीका विभिन्न देशमा ५ सय ४५ जना नेपाली कैदी बन्दी रहेका छन् ।
मलेसिया, कुवेत, यूएई, ओमान, साउदी अरब, कतार र बहराइनमा धेरै नेपाली कैदि जीवन बिताइरहेको बोर्डको तथ्यांक छ । यस मध्ये १९ जना महिला पनि समावेश छन् । जेलमा रहेका मध्ये २ सय ९३ जनाको सजाय तोकिएको छैन ।
बोर्डको चैत मसान्तको तथ्यांक अनुसार २५ जना नेपालीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ, ७ जना आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका छन् । जरिवाना तोकिएर जेलम बसिरहेका नेपाली १८ जना छन् ।
मृत्युदण्ड सुनाइएका मध्ये मलेसियामा सबैभन्दा धेरै रहेको बोर्डको तथ्यांक छ । मलेसियामा दुई महिला सहित २ सय ५ नेपाली जेलमा छन् । त्यसमध्ये १६ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ ।
१ सय ९० जनाको भने अझै सजाय तोकिएको छैन । यूएईमा १२ महिला र १ सय ७३ पुरुष गरी १ सय ८५ नेपाली कामदार कारागारको जीवन बिताइरहेका छन् । त्यसमध्ये एकजनालाई मृत्युदण्ड र ४ जनाले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका छन् ।
कुवेतमा ३ महिलासहित ५८ जना नेपाली कामदार जेलमा रहेकोमा ३ जनालाई मृत्युदण्ड र ९ जनालाई आजीवन काराबासको सजाय तोकिएको छ ।
खाडीका धेरै देशमा रक्सी तथा लागुपदार्थ प्रतिवन्धित छ । तर, नेपालीले यही सेवन तथा बेचबिखन गर्छन् पक्राउ पर्छन् । भिसा अवधि सकिएपछि पनि देश नछाड्ने प्रवृत्ति पनि नेपालीमा छ ।
स्थानीय कानून नमान्दै निषेधित क्षेत्रमा छिर्ने, जथाभावी फोहोर गर्ने कारणमा पनि नेपाली जे पर्छन् । ज्यान मारेको केशमा पनि नेपाली जेल पुग्ने गरेका छन् ।
एमसीसीतर्फ संकेत गर्दै प्रचण्ड भन्छन् : सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित विदेशी सहायता अस्वीकार्य